रासस ‘राष्ट्रको टिकट’ हो - Kantipath.com
यहाँमात्र होइन बाहिरी मुलुकका विज्ञ, खुफिया निकायका मानिसले आधिकारिक चाहिँ सरकारी सञ्चारमाध्यमाई मान्छन् । सरकारी सञ्चारमाध्यमले ठाडै प्रोपगान्डा ग¥यो भने उसले बुझ्छ । हामीकहाँ आएको तथ्याङ्क शतप्रतिशत सत्य हुन्छ र यदि आएन भने हामी तुरुन्त सही तथ्य दिन्छौँ भनेर नारा नै बनाउनुपर्छ र कामले प्रमाणित गर्र्नुपर्छ । राससको भविष्य राम्रो छ कि छैन भन्ने कुरा सरकारमा धेरै भर पर्छ ।
लोकतान्त्रिक सरकार अझ परिमार्जित हुँदै आयो भनिएको छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक सरकार त झनै चनाखो हुनुप¥यो नि । त्यसबाट सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ । यो विश्वास छ र यस्तो गर्न पनि सकिन्छ ।( लेखक राससका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ । यो लेख रासस हीरक वर्षका पूर्वसन्ध्यामा कुराकानीमा आधारित भई प्रकाशन गरिएको हो )
Previous Previous post: डिजेल चोरी तस्करी गर्ने ट्याङ्करसहित तीन पक्राउ
Next Next post: मानव बेचबिखनको आरोप लागेका सुवेदी पक्राउ
हातहतियारसहितको सुरक्षा गस्तीसहित विद्यालय हातामा बस्दै राज्यमन्त्री !
प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन : नेतृ झाक्री
प्रकाशले भने, ‘डा. केसीलाई साथ दिन्छौँ’
Lockdown comes as boon to wildlife in Chitwan National Park
प्रधानमन्त्रीसहित सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने को-को ?
प्रधानमन्त्री ओलीकाे ट्रस्टको जग्गा अवैधानिक